HVAC FAQs - Beijing Holtop Air ongenisa Co., Ltd.
Yintoni Energy recovery mpilo?
komoya recovery Energy (ERV) yinkqubo recovery amandla tshintshiselwano amandla equlethwe kwisakhiwo ngokwesiqhelo elibharhileyo okanye emoyeni isithuba kwaye usebenzisa ukuze ukunyanga (Imeko) angenayo ngaphandle umoya umoya kwiinkqubo HVAC zokuhlala kunye nezorhwebo. Ngexesha lonyaka ezifudumeleyo, inkqubo kwangaphambili-lupholayo kunye dehumidifies ngelixa humidifying kwaye pre-zokufudumeza yakhe ngexesha elipholileyo. Inzuzo yokusebenzisa recovery amandla kukukwazi ukuhlangabezana ASHRAE umoya & amandla imigangatho, lo gama iphucula umgangatho womoya zangaphakathi kunye nokunciphisa umthamo nezixhobo HVAC iyonke.
Xa ilizwi, Energy Indawo yoBuyiselo-mpilo (ERV) uvumela umoya amatsha isakhiwo, lo gama kugcinwe ukufudumeza pre-conditioner okanye zokupholisa.
Yintoni na inkcazo imodeli?
Ubushushu & Energy Recovery Ventilators
Qaphela: Uhlobo Ukufakwa
uhlobo umisiwe, uhlobo L-Floor
XHBQ-D10TH ibhekisa imisiwe uhlobo ERV epheleleyo sokufudumeza, TH series, umoya fl ukuhamba kwamanzi ka 1000m3 / h, 3 ngezantya.
Indlela yokukhetha AHU?
Holtop AHU ziyilelwe yaye bakhethwa ngendlela software umsebenzi, ukunika abasebenzisi kunye nezisombululo umoya nengqiqo, kwezoqoqosho, kunye nezenziwayo. Iimpawu ze-software selection Holtop AHU nazo ziquka:
project Sound kunye nolawulo umbuzo AHU
komoya Echanekileyo kunye neyunithi amaqela icandelo
Multiple izinketho ubushushu kunye nendibaniselwano icandelo functional
Urhulumente air point calculation amacandelo aphambili
iindawo ezahlukeneyo ongazikhetha
l unit imifelandawonye Flexible
l Professional lokukhetha eneenkcukacha Iingxelo output
Ngaba Yenza AHU Design Service?
Yila iprojekthi yakho usebenzisa Holtop Air nokusingatha Iiyunithi
Holtop AHUs zisekelwe uyilo yemodyuli ngokupheleleyo, ekwaziyo sivumelane iimfuno iintlobo ngeentlobo ufakelo, kwaye ziphuhliswe ngokunikela ingqalelo ekhethekileyo okukhethekileyo kwamandla alingeneyo. Nceda unike iinkcukacha iprojekthi yakho kunye neemfuno kangangoko unako ukuze sikwazi ukwenza isindululo kuwe kamsinya kangangoko kunokwenzeka.